Nutrition – Page 22 – Healthy Life Journal
All posts tagged "Nutrition"
ပရိုတင်းဓာတ်ပါဝင်မှု မြင့်မားတဲ့ နံနက်စာ စားရအောင်
မိမိုး ( ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) သင့်နံနက်စာမှာ ပရိုတင်းပါဝင်မှု ရှိရဲ့လား။ အဝလွန်ရောဂါဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာဂျာနယ်ရဲ့ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ပရိုတင်းပါဝင်မှုများတဲ့ နံနက်စာစားတဲ့ သူတွေက ပရိုတင်းပါဝင်မှုနည်းတဲ့ နံနက်စာစားလေ့ရှိသူတွေထက် နေ့လယ်စာမှာ ကယ်လိုရီမှီဝဲမှု ၂၆ ရာခိုင်နှုန်း ပိုနည်းတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီအာဟာရဓာတ်တွေက အူကနေ...
မသန့်ရှင်းတဲ့ အပြင်စာတွေကို စားဖန်များရင် ဘယ်လို ဆိုးကျိုးတွေ ရတတ်သလဲ . .
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊(ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အဆောင်တွင်နေသည့် ကိုမင်းမင်းတစ်ယောက် မနက် မနက် အလုပ်ချိန် ၉ နာရီရောက်အောင် ပြေးလွှား သွားလာနေရသည့်အတွက် ထမင်း၊ ဟင်း ချက်ပြုတ်ဖို့ အချိန်မပေးနိုင်။ မနက်မိုးလင်းလို့ မျက်လုံးနှစ်လုံးပွင့်တာနဲ့ ကမန်းကတမ်း ထရသည်။ ရေချိုး၊ အဝတ်အစားလဲပြီး...
ကျန်းမာရေးချူ ချာသော အမျိုးသားတို့အတွက် နည်းလမ်းကောင်းများ
၊ ဦးမိုး ၊ ဆရာဝန်နဲ့ မတွေ့ဆုံဖြစ်ဘူး ဆိုရင်၊ နောက်ဆုံးအကြိမ် ဆေးစစ်ထားတာကို သတိမရတော့ဘူး ဆိုရင် ဒါက သင်တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် အမျိုးသားတွေက ဆရာဝန်နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု နည်းပါတယ်။ ကျန်းမာရေး ချူချာပါတယ် ဆိုတဲ့...
အချိုမှုန့်ကို ရေရှည်စားရင် ဘာဖြစ်တတ်သလဲ . .
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးမှ ဖြေကြားသည်။ မေး. အချိုမှုန့်ကို ရေရှည်စားရင် ဘာဖြစ်နိုင်ပါသလဲ သိချင်လို့ပါ။ အချိုမှုန့်မပါရင် အရသာမရှိဘူးလို့ စိတ်က ထင်နေပါတယ်။ အချိုမှုန့်မပါဘဲ စားတတ်အောင် ဘယ်လိုချက်ပြုတ်သင့်ပါသလဲ။ နွဲ့နွဲ့၊ ပျဉ်းမနား။ ဖြေ. အချိုမှုန့်ကတော့ MSG-Monosodium...
ကြက်ဥ၊ ဘဲဥကို မကျက်တကျတ်ပြုတ်စားခြင်းဖြင့်Albumin ဓာတ်ရရှိစေနိုင်
ကြက်ဥ၊ဘဲဥကို မကျက်တကျက် ပြုတ်စားလျှင် အယ်လ်ဗျူမင် (Albumin) ဓာတ်ကိုရရှိစေကြောင်း အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့်က ဆိုသည်။ “ဟိုးအရင်ကတော့ကြက်ဥ၊ ဘဲဥကိုမကျက်တကျက် ပြုတ်စားရင် ပိုးတွေဘာတွေမသေဘူးလို့ ပြောကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုအချိန်အထိတော့ အဲဒီလိုမျိုး မတွေ့သေးပါဘူး။ ဆေးရုံမှာဆိုရင် လူနာတွေကို ကြက်ဥ၊...
ဖြူစင်ဝင်းပသည့် အသားအရေ ပိုင်ဆိုင်လိုသူတို့အတွက် သဘာဝအစာများ
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ အမျိုးသမီး အများစုဟာ ပင်ကို အသားအရေထက် ပိုပြီး ဝင်းပကြည်လင်ဖို့ရာ အတွက် အလှကုန် အမျိုးမျိုးကို စမ်းသပ်သုံးစွဲလေ့ ရှိကြပါတယ်။ အခုခေတ်မှာ အလှကုန်မိတ်ကပ် အမျိုးမျိုးရှိတဲ့အတွက် ကိုယ်နဲ့သင့်တော်တဲ့ အမျိုးအစားကို ရွေးသုံးရင်း အသားအရေ ဖြူစင်ကျန်းမာဖို့ရာ...
ကျောက်ကပ် ကျန်းမာစေကြောင်း နည်းလမ်းကောင်းများ
၊ ဦးမိုး ၊ “ကာကွယ်ခြင်းက ကုသခြင်းထက် ပိုကောင်း၏” ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း လိုက်နာနိုင်ဖို့ ကျောက်ကပ် ကျန်းမာရေးအတွက် နည်းလမ်း ကောင်းတွေကို မျှဝေလိုက်ရပါတယ်။ (၁) ကျောက်ကပ်အပေါ် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး သက်ရောက်မှုကို လျှော့ချပါ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေ လျော့ကျစေဖို့...
စိုးရိမ်စိတ်ကို ကုစားနိုင်မည့် အစာများ
စိုးရိမ်စိတ်တွေ၊ ပူပင်သောကတွေနဲ့ စိတ်ထဲဝမ်းနည်းနေချိန်မှာ ဒီခံစားချက်တွေကို ကုစားနိုင်စေမယ့် အစာတွေကို ရွေးချယ်စားသင့်ပါတယ်။ (၁) ကောက်နှံတစ်ခုလုံးနှင့် လုပ်ထားသောအစာ ကောက်နှံတစ်ခုလုံးနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ အစာတွေက ပူပင်သောကကို တွန်းလှန်နိုင်ပါတယ်။ ကောက်နှံတစ်ခုလုံးနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ အစာထဲမှာ မဂ္ဂနီဆီယမ် ပါဝင်တာကြောင့် စိုးရိမ်စိတ်ကို သက်သာစေပါတယ်။...
အများပြည်သူ ကျန်းမာဖို့ရာ အာဟာရပြည့်ဝတဲ့ တန်ဖိုးသင့်ညစာ . .
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အင်္ဂပူမြို့နယ်က မြို့နယ်ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာနန္ဒဝင်း၏ “တန်ဖိုးသင့် ညစာ” ဆိုလျှင် မကြားဖူးသူ ရှားပေလိမ့်မည်။ ၁၉-၄-၂၀၁၅ ရက်နေ့က စတင်ပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သည့် အာဟာရ ပြည့်ဝ တန်ဖိုးသင့်ညစာကို စတင်ရောင်းချပေးခဲ့သော ဒေါက်တာနန္ဒဝင်းသည် ကိုယ်တာဝန်ကျသည့် နေရာတွင်...
သွေးထဲ ခရစ်ယာတင်နင်းဓာတ်များနေလျှင် . . .
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး ဒေါ်လှလှမေ၊ ပြည်။ မေး-. သွေးထဲ ခရစ်ယာတင်နင်းဓာတ် များနေရင် ဘယ်လိုအစာတွေကို စားသင့်ပါသလဲ၊ ဘယ်လို အစာတွေကို ရှောင်သင့်ပါသလဲ။ ဖြေ-သွေးထဲ ခရစ်ယာတင်နင်း ( Creatinine ) တက် နေသူတွေအနေနဲ့...